VIDEO NEWS: Guddoomiyaha Tasho Community “Haddaad gabar wax bartid waxeey la mid tahay adigoo mushtamac wax bartay” | YoobsanNews.com
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug waxaa lagu soo dhoweeyey wefdi ay horkaceyso Guddoomiyaha ururka Tasho Community ee fadhigiisu yahay Minnesota Canab Cabsiiye.
Xaflad aad u qiimo badneyd oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka Gobolka, ayna ka soo qeybgaleen xubno ka socday qeybaha bulshada, ayaa lagu daah-furay soo dhoweynta Canab, waxaanna goobtaasi ka hadlay xildhibaanno ka tirsan dowladda federaalka & kuwa dowlad goboleedyada, kuwaas oo bogaadiyey howlaha samafalka ah ee Canab hormuudka u tahay.
Waxeey ka hadashay xaaladdaha adage ee ay ku sugan yihiin haween-weynaha Soomaaliyeed iyo dib u dhaca soo gaaray jiilalkii u dambeeyey oo aysan fursadu u saamixin helitaanka waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha oo ay waxbarashadu ugu horreeyso.
“Haweenku waa laf-dhabarta bulshada; dayow-ga Soomaali ku dhacay waxaa qeyb ka ah in dayaca & dhibaatada ku raagtay hooyooyin fara badan & caruurtooda; bulshadu haddii aysan helin waxbarasho lama saanqaadi karto asaageed, waxeeyna u nugushahay wax walba oo qiyamkeeda hoos u dhigaya” Ayeey tiri Canab Cabsiiye, waxeyna ugu baaqday Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay waxqabadkeeda ku darsato sidii loo gacan siin lahaa haweenka, loona abuuro fursado waxbarasho oo billaash ah.
Previous: Soomaali abaabuleysa bannaanbaxyo ka dhan ah Sacuudiga & Imaaraadka
Next: Xaalad CUSUB oo ku soo korortay Isgoys-yada Muqdisho